Cudurdaar!!! – dhugasho
maxamedsheekafguun Juunyo 25, 2020 sheekooyin
Akhristayaasha sharafta leh, waxaan markasta idinka cudurdaaranaynaa hakashada qormooyinka taxanaha ah ee aad i nooga barateen. Waxaa mararka qaar dhacda cillado, mararka qaarna waxaa dhacda hakasho ku imaata shaqada lafteeda, aad iyo aad baan idiinka raalligalinaynaa. Waxaana rajaynaynaa in aysan nagu badan hawlaha hakashadooda, oo aan si haqabtiran idiinku soo gaadhsiino.
Intaa ka dib
Waxaa bishan July ee foodda inagu soo haysa inoo billaabanaysa sheekadii la baxday “Adeegto”. Waa sheeko aad wax badan ku dhex arki doontaan, waana sheeko xambaarsan wacyigalin, u badan dhanka ilaalinta iyo wadanoolaanshaha iyo sidoo kale dhaqanka lagula dhaqmayo ubadka iyo aayaha mustaqbal ee reerka.
Waxaa laga yaabaa in waalidku wada korsado carruur aysan wada dhalin, oo qaarna aabbuhu hooyo kale u dhashay, ama ay koriyaan carruur ay hooyadu u dhashay nin kale, isla markaana ay guursatay nin kale, oo ay wada koriyaan carruurtaas. Haddaba sheekadu waxay daarran tahay wacyigalintaas. Waa sheeko u baahan in aad loo dhuuxo insha Allah. Waxayna billaaban doontaa Jimcaha koobaad ee bishan soo socota.
Sheekadii inoo socotay ee inoogu dambaysay, waa la joojiyay sababtoo ah arrimo la xidhiidha qoraha sheekadaas oo codsaday inaan lawada baahin buuggaasi oo intaas lagu hakiyo illaa iyo xilli kale inta laga gaadhayo, codsigaasna sidaas ayaan ugu tixgalinay, adinkuna nala tixgaliya fikirka qoraaga, waad mahadsan tihiin.
Qormo Xikmad ah